DHAGAYSO: Tarsan oo si Adag uga Hadlay Xadhig RW Somaliya loogu Gaystay Nairobi,Dhaliil-na u Jeediyay Dowladda – Radio Daljir
Febraayo 21, 2016 3:47 b 0
Boossaaso, 21, Febru, 2016 -(Daljir)_Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha Xisbiga Cadaalada Bulshada Oo Kahadlay Xanibaadii wafdiga Ra’iisul Wasaaraha iyo Xaaladda Siyaasadeed ee Dalka.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha Xisbiga Cadaalada Bulshada Maxamed Axmed Nuur Tarsan, ayaa siweyn u dhaliilay hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo hogaanka dalka oo uu sheegay inay shaqadii loo igmaday ku guul daraysteen.
Gudoomiye Tarsan oo maanta waraysi gaar ah siiyey Idaacadda Daljir ayaa wuxuu qaadacay go’aankii dhowaan laga soo saaray shirkii hanaanka geedi socodka doorashada Soomaaliya ee Muqdisho kadhacay oo uu tilmaamay inuu ahaa mid ay wateen dad dano gaar ah leh.
Dhanka kalena Maxamed Axmed Nuur (Tarsan), ayaa sheegay in dhacdadii ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waftigiisa ka qabsatay garoonka Jomo Kenyatta ay ahayd mid ay keentay maamul xumada Soomaaliya kajirta sida uu hadalka u dhigay.
Cabdirashiid Bashiir Maxamuud oo Garoowe kusugan ayaa khadka Telefanka ee Muqdisho ku waraystay.
(Warsaxaafadeed) Dawladda Puntland ka hadashay Mowqifkeeda wax-ka badalka Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya